“Waxaa tihiin muwaadiniin xaq u leh waxa muwaadiniinta kale xaq u leeyihiin..” (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Waxaa tihiin muwaadiniin xaq u leh waxa muwaadiniinta kale xaq u leeyihiin..” (SAWIRO)
Wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shir wadatashi ah la yeelatay ururada dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ku saabsanaa sidii loo dhageeysan lahaa taladooda ku qotonta dhameeystirka dastuurka.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka Avv C/raxmaan Xoosh Jibriil oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in wasaaraddu ku dhiira-gelinayso dadka naafada ah inay ka qeyb-galaan ololaha geedi-socodka dib u eegista dastuurka.
“Waxaa tihiin muwaadiniin xaq u leh waxa muwaadiniinta kale xaq u leeyihiin, waxa aan hubin doonnaa in dastuurka uu noqdo mid idiin daryeela islamarkaana xuquuqihiina tilmaama” Ayuu yiri wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Dhanka kale, kasoo qeyb-galayaasha ayaa wasaaradda ugu mahadceliyay sida ay ugu dhiiratay inay kulankan la qaataan oo ay taladooda dhageystaan, waxa ayna ku dhiira-geliyeen wasiirka iyo dhamaan shaqaalaha wasaaradda inay qareen u noqdaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Ugu dambeyn, wasiirka ayaa ballan qaaday in dhamaan maamul goboleedyada dalka la gaarsiin doono kulamadaan wadatashiga ah, si dadka ay ugu dhiiradaan in taladooda ay uga qeyb-qaatan ololaha hanaanka dib u eegista dastuurka oo wasaaraddu ay ka go’an tahay inuu noqdo mid daah-furan.